I-Polyethylene glycol (i-PEG) yipolymer ye-ethylene oxide kunye namanzi. Yiparafini emhlophe okanye umgubo oqinileyo, ongenavumba okanye onevumba elibuthathaka. Ayiyityhefu, ayicaphukisi, inokunyibilika kwamanzi, kwaye inokuhambelana okuhle nezinto ezininzi eziphilayo. Zisetyenziswa ngokubanzi kwizithambiso, amayeza, ifayibha yemichiza, irabha, iplastiki, ukwenza iphepha, ipeyinti, ielectroplating, isibulala-zinambuzane, ukuqhubekeka kwesinyithi kunye nemizi-mveliso yokulungisa ukutya ngenxa yokuthambisa kwazo, ukufuma, ukusasazeka, ukubambelela, iiarhente ze-antistatic kunye nezithambisi.
Ukugcinwa kunye nokuthuthwa kwePOLYTHYLENE glycol (i-PEG): le mveliso ayinabungozi kwaye ayinakutsha. Kufuneka ihanjiswe njengeekhemikhali ngokubanzi kwaye igcinwe kwindawo eyomileyo etywiniweyo. Owona usetyenziso luphambili: ithebhulethi, iphilisi, idyasi yefilimu, ipilisi yokuwisa, i-suppository, njl
Ubunzima obuphezulu be-PEG (i-PEG4000 kunye ne-PEG6000) buluncedo njengokubambelela ekwenzeni iitafile ngenxa yeplastiki yePEG ngexesha lokulungiselela kunye nokukwazi kwayo ukukhupha ukukhutshwa kweziyobisi kwiipilisi. I-PEG yenza umphezulu wecwecwe ucwebezele kwaye ugude, kodwa ungonakali lula.
Ubume be-PEG bungaphantsi kunobo be-molecular diols ephantsi kwaye buncinci kune-glycerol, ngenxa yoko umxube we-polyethylene glycol awuthatheli ngqalelo kutshintsho lobushushu, kunye nokuthamba kunye neplastikhi yezi zinto zihlala zifana nasemva kwexesha elide yokugcina. Isikhonkwane asizinzanga kangako kune-diethylene glycol okanye i-triethylene glycol. I-polyethylene engamanzi (isikhonkwane) i-200-600 inokubonelela ngokukhetha ngokubanzi, ngakumbi ifaneleke ukuba iplastizerizer, izongezo zerabha, ingasetyenziselwa ukulungiswa kwearhente esebenzayo, ipeyinti kunye ne-inki, amayeza, izithambiso, isepha, ukwenziwa kwamaphepha, ilaphu, ukutya izongezo, ukulungiswa kwesikhumba, ioyile, ukuqhubekeka kweenkuni, iiseramikhi, ezolimo, ukuxhonywa, izinto ezifotayo, izinto zokubambelela kunye nezinto zokupakisha, njl.